विशेष बर्दियामा वामदेव गौतम र सञ्जय गौतम : कसको बोलीमा कति दम ?
Ujyaalo शुक्रवार, मंसिर १५, २०७४ २०:१८:००
बर्दिया, मंसिर १५– एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र वर्तमान मन्त्री समेत रहेका सञ्जय गौतम बर्दिया १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि प्रतिष्पर्धामा छन् । दुवै नेता चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहेका दुवै नेतासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
हाम्रा चुनावी एजेण्डा तीन तहका छन् । त्यो भनेको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हुन् । तत्कालका लागि नागरिकको गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोरञ्जनका विषय उठाएका छौँ । त्यसपछि सिँगो समाजको परिवर्तन हो ।
हाम्रो संविधानले अबको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ भनेको छ । यसै बमोजिम यी विषय हाम्रा साझा घोषणा अनुसार अघि सारेका छांै । नेपाली समाजमा अहिले पनि घरवारबिहीन सुकुम्बासी, भूमीहीन, मुक्त कमैया, कम्लहरी, गरीब र उत्पीडित पहिचान गरी बसेका नागरिकलाई हाम्रो सरकार बनेपछि पाँच वर्षभित्रमा सुविधा सम्पन्न आवास, एक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारीसँगै माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पास गरेको ६ महिनाभित्रै तालिम दिई रोजागारी दिएर शैक्षिक बेरोजगारी हटाउने, स्वास्थ्य विमा लागू गर्ने, उपचारका लागि गरिबीको रेखामुनी रहेकाहरुलाई सरकारले आधा पैसा मिनाहा गर्ने मध्यकालीन एजेण्डा छन् । यसैगरी ६ वर्ष भित्रमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छाँै । सबै कृषि भूमीमा सिँचाई, नेपालका प्रमुख नदीहरुबाट २० हजार मेघावाट भन्दा बढी जल विद्युत आयोजना सुरु गरि विद्युत उत्पादनले नेपाललाई भरपुर बनाउँछौ ।
प्रश्न : तपाईंले लिएको एजेण्डा पुरानै मानिन्छन् नि ? चुवाव जितेर गएपछि सबै कुरा बिर्सेको मतदाताको आरोप छ त ?
कुरा बिर्सेको होइन । हामी सरकारमा बस्दा लागू गर्ने प्रयास गर्छौं । सरकारबाट बाहिरीएपछि अरुले आफनो अनुकूलले मात्र काम गर्ने परिपाटीले गर्दा हामीले शुरुवात गरेका कामहरु ओझेलमा पर्छन् । हामी प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार चलाउनेलाई घच्घच्याउने हो । सरकारमा नहुँदा काम पूरा गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।
कांग्रेससँग प्रतिष्पर्धाको कुरै छैन । २०४८ सालदेखि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको परिणामले पनि कांग्रेस भन्दा वामपन्थीको जनाधार निकै बढी रहेको देखाईसकेको छ । यहाँ हाम्रो पक्षमा देखिएको जनमत नै मैले जित्ने आधार हो । वामपन्थीको जनाधारलाई कसैले फकाएर कुण्ठित गर्न सक्दैन । बर्दिया मात्र होइन नेपालभरी हामीले गरेको चुनावी तालमेल अनुसार कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा दुई तिहाई जनमत छ । त्यो जनमत नै वाम गठबन्धनले जित्ने मुख्य आधार हो ।
म बर्दियामा फर्केर आउँदा कार्यकर्ता मतदाता असन्तुष्टि छन् भन्नै मिल्दैन । यसअघि पनि चुनाव जितेपछि छोडेर किन जानुभयो भन्नेमा असन्तुष्टि हो । अहिले फर्केर आउँदा कार्यकर्तामा उत्साह जागेको छ । मेरो आवश्यकता फेरि महशुस भयो । विपक्षीसँग खरो उत्रनका लागि कार्यकर्ताले मेरो उपस्थिति अनिवार्य ठाने, मैले पनि त्यही महशुस गरेँ । त्योबेला मेरो व्यक्तिगत निर्णयले बर्दिया छाडेको होइन । पार्टीको निर्णय अनुसार प्यूठान गएको हुँ । यहाँ त पार्टी बलियो थियो नै । प्यूठानमा पार्टीलाई बलियो बनाउनु थियो । त्यसैले पार्टीको निर्देशन बमोजिम त्यहाँ गएको हुँ । आखिर पार्टीलाई फाइदा नै भयो । म यहाँ फर्कंदा कोही आतंकित भएका छन् भने त्यो कांग्रेस नै हो । वाम गठबन्धन भएपछि कुनैपनि ठाउँमा कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा नै छैन ।
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुकुम्बासी, घरवार विहीन, मुक्तकमैया कम्लहरी र पिछडिएका समुदायलाई सुविधा सम्पन्न आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरञ्जन प्रदान कामबाट सुरु हुन्छ । यसैगरी कृषिको व्यवसायिकरण, उर्जाको विकास, पर्यटनको विकास र औधोगिक क्षेत्रको विकास प्रथमिकतामा हुनेछ । यी सबै कामहरु ५ वर्षमा हामी पूरा गर्नेछौँ । हामीले ३ तहमा रेल चलाउनेछौँ । एउटा पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर, औधोगिक करिडोरको समानान्तर, मध्यपहाडी राजमार्ग समानान्तर र काठमाण्डौँमा विद्युतीय मेट्रो रेल संचालन गर्छौँ । यसैगरि ४ लेनको हुलाकी सडक, उत्तर दक्षिण २ हजार किलोमिटर सडक निमार्ण र ८१ हजार किलोमिटर आफनो गाउँ, आफै बनाउँ अन्तर्गतका बाटोहरु पिच गरि कृषि सडकका रुपमा स्थापित गर्नेछौँ ।
गठवन्धन मात्र हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भने चुनावसम्मका लागि मात्रै हो यो गठबन्धन । तर हाम्रो पार्टी एकताको कुरा हो । अहिलेको चुनावी गठबन्धन हाम्रो पार्टी एकताको पहिलो चरण हो । पार्टी एकता गर्ने तयारी गरिसकेका छौँ । पार्टी एकता समन्वय समिति केन्द्रमा, त्यसपछि प्रदेशमा, जिल्लामा र स्थानीय तहदेखि वडासम्म बनिसकेको छ । त्यसकारण पार्टी एकता प्रमुख हो । पार्टी एकता गर्न समय लाग्ने भएकाले हतारमा चुनावी तालमेल मात्र गर्यौं । निर्वाचन आयोगले दिएको समय तालिका अनुसार समयमै पार्टी एकता गर्न सकेनौँ, त्यसैले तालमेल मात्र गर्यौँ । पार्टी एकता हुने कुरा निश्चित छ । अब कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुन्छ र यो एकता पछि सबैभन्दा ठूलो चोट परेको छ भने त्यो चोट कहिले नमेटिने गरि नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ । अहिलेको तालमेलबाट बन्ने सरकार ५–१० वर्षका लागि मात्र होइन, आगामी ३० वर्षसम्म हाम्रै नेतृत्व हुन्छ ।
बर्दिया जिल्लालाई सम्मुनत र सम्बृद्ध जिल्ला बनाउन चाहन्छु । मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र भूमीहीनहरुको समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएर लाग्नेछु । बर्दिया जिल्लाको विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नका लागि ध्यान दिने र जिल्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्ने अभियानमा लागिरहेको छु र निरन्तर लागि रहनेछु ।
नदी कटान, डुवान र नियन्त्रणका समस्याहरु जटील छन् । यसको प्रक्रिया मैले सुरुवात गरिसकेको छु । बबई, ओराही र मानखोला लगायत साना नदी नियन्त्रणका योजना अघि सारेको छु । आगामी दिनमा यी कामहरुलाई पूर्णता दिनेछु । सदरमुकामलाई राजमार्गसम्म जोड्ने भुरिगाउँ तेलपानी सडक बनाउने, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने, बर्दियालाई पर्यटनको सुरक्षित गन्तब्यको रुपमा विकास गर्ने, कृषि, वन र पर्यटनमा आधारित उद्योगको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
मलाई जिताएर अवसर प्रदान गर्नुभएमा म नागरिकलाई परिवर्तन दिन्छु, बर्दियाको विकास गर्छु । नैराश्यतामा रहेका यहाँका बासिन्दालाई आशाको सञ्चार प्रदान गर्नेछु । जिल्लालाई सम्बृद्धिको यात्रामा अघि बढाउँछु र राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्नेछु भन्दै मतदाता समक्ष गैरहेको छु ।
होइन, यो कुरा सरासर गलत हो । मैले जे बोलेको छु त्यो पूरा गरेकै छु । संविधान दिन्छु भनेको थिएँ । हामीले दियौं । जिल्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्छु भनेको थिएँ । त्यो पनि गरें ।
यहाँ विकासका पूर्वाधार निमार्ण गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, मुक्तकमैया र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने, नदी नियन्त्रण गर्ने, थारु बहुल यो जिल्लालाई कृषि विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने लगायतका काम मेरो प्राथमिकतामा रहनेछन् । हाम्रो बर्दिया राम्रो बर्दिया बनाउन निरन्तर लागि रहनेछु ।
मलाई के लाग्छ भने आमनागरिकमा वाम गठबन्धनबारे त्यति चासो छैन । यो त ठूला नेताहरुले आफ्नो कुर्सीको संरक्षणका लागि र आफ्नो ईज्जत बचाउनका लागि गरेको गठबन्धन हो । यो कुनै नागरिकको आमूल परिवर्तन र सम्बृद्ध विकासका लागि गरिएको गठबन्धन होईन । असुरक्षित भएका नेताहरुले गाठबन्धनको खोजी गरे, त्यही अनुसार गठबन्धनको प्रकृया अघि बढेको हो । वाम पार्टी एकता यी सबै भ्रामक कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैन । यो वाम गठबन्धनले मलाई कुनै असर गर्दैन ।